01 mai 11 : Misaona ny tontolon’ny asa, be ireo very asa nandritra izay roa taona izay – MyDago.com aime Madagascar
01 mai 11 : Misaona ny tontolon’ny asa, be ireo very asa nandritra izay roa taona izay
Fankalazana ny fetin’ny asa : Misaona ny tontolon’ny asa, be ireo very asa nandritra izay roa taona izay !
Auteur Solo Razafy*Publié le 1 mai 2011 1 mai 2011 Catégories Politique
4 réflexions sur « 01 mai 11 : Misaona ny tontolon’ny asa, be ireo very asa nandritra izay roa taona izay »
2 mai 2011 à 2 h 23 min
Mafy tokoa ny fiainana amin’izao fotoana izao satria betsaka ireo very asa, tsy tenenina intsony ireo very zo any am-ponja! ny FATn’alika sy ny forongony anefa dia miliba sy mitsangatsangana amin’ny Jet privé, izay volan’ny vahoaka nangalarina tamin’ny « bois de roses » sy ny harena eto Madagasikara!
Mbola hanaiky an’izao tsindry hazo lena izao foana ve isika vahoaka mandady harona? Mbola ho ekentsika foana ve fa karama vary masaka no omena antsika, kanefa ny HATay sy ny mpomba azy manao ny tsy maty manota mnodinkodina nny vola sy ny harem-pirenena?
Mba vola ohatr’inona no omena antsika mpiasam-panjakàna dia mangina isika?.. Ny FATn’alika mahazo 2.000.000AR./mois raha kely indrindra, isika zara raha mahazo 200.000AR/mois, dia faly ery! RAHOVIANA ISIKA VAO MBA AHATSIARO TENA HOE AOK’IZAY E?
Tsy misy hamonjy antsika izany eo, fa tsy maintsy isika no mihetsika, miady hatramin’ny farany raha te ho afaka amin’izao fahoriana izao e! aza manofy fa io dondrona io akory tsy hiala ho azy eo. Ampy rey olona izay 2 taona izay a! tongava saina e! izao izy nanao fampitaovana ny CAPSAT indray, hatao inona? tsy hanajana anao akory io fa hamonoana anao, ianao mpianatra io, ianao mpiasam-panjakana, isika rehetra amin’ny sehatra rehetra, mifohaza, mifohaza, vonjeo ny firenenao, aoka izay izany fifampiraharahana izany. Sa mbola mety aminao izao fahoriana izao?
Marina dia marina ny anao ry Manjaka !! Tsy misy ampiana ary tsy misy anesorana !
4 mai 2011 à 23 h 29 min
Nenina tsy alohan’ny anatra e! moa tsy ny mpiasan’ny zones franches no tena nitady an’ity revôlisiô oransa ity?
Précédent Article précédent : Antso mivantana filoha Ravalomanana : « tsy maintsy hilatsaka hofidiana aho »
Suivant Article suivant : video Hetsiky ny mpiasa sy very asa 01 Mey 2011